Imidlalo eyi-10 ehamba phambili yebhola ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi - Izindaba zeGajethi | Izindaba zamagajethi
Imidlalo eyi-10 ehamba phambili yebhola ngaphandle kwe-Intanethi, ye-iOS ne-Android
ILaliga Santander isizoqala kabusha futhi isudi yebhola isiqala ukukhombisa, singayisebenzisa ngokunenzuzo ukufudumeza izinjini zethu cishe. Maphakathi no-2020, ukudlala umdlalo wevidiyo uwedwa kuncane kakhulu, kepha asifuni ngaso sonke isikhathi ukuqhudelana nabanye abadlali futhi asinakho ukuxhumana okuhle kwe-inthanethi ukwenza lokho. Okuthile okuyisisekelo njengokudlala imidlalo yebhola ngaphandle kwe-inthanethi kusengenzeka.
Ku-Google Play noma ku-AppStore kunenqwaba yemidlalo yebhola, eminingi yayo imahhala kepha idinga ukuxhumana unomphela kwi-inthanethi, ngaleyo ndlela ikuvimbele ekungeneni kuyo uma untula idatha noma i-WiFi, ikhambi kuphela ukuba nemidlalo ehlukene ongayidlala ngaphandle kwalolo xhumano. Kulesi sihloko sizokwenza ukuhlanganiswa kokutholakala okungcono kakhulu kwe-smartphone noma ithebhulethi.
1 Uhlu lwemidlalo engu-10 ehamba phambili yebhola ngaphandle kwe-inthanethi ye-iOS ne-Android
1.1 Ibhola le-FiFA
1.2 I-eFootball PES 2020
1.3 I-Soccer League Soccer
1.4 Ibhola langempela 2020
1.5 I-Soccer Star 2020 Amaligi aphezulu
1.6 Umphathi webhola 2020 Iselula
1.7 I-Final Kick 2019
1.8 I-2020 Eyishumi Naphezulu
1.9 Indebe yebhola 2020
1.10 I-Retro Soccer
Uhlu lwemidlalo engu-10 ehamba phambili yebhola ngaphandle kwe-inthanethi ye-iOS ne-Android
Sineziqu eziningi ezihlangabezana nale mfuneko, zonke zisebenza ngaphandle kwenkinga, ngoba efakwe ngokuphelele kwimemori ye-smartphone yethu. Kumele kuqashelwe ukuthi cishe zonke ziyatholakala kuzo zombili i-iOS ne-Android. Sithatha leli thuba ukukukhumbuza ukuthi sisanda kushicilela isifundo se- thuthukisa ukusebenza kwemidlalo ku-Android.
Inkosi yamakhosi ngokungangabazeki "YI-FIFA", umdlalo osuthole isihlalo sawo sobukhosi emidlalweni enhle impela. Idalwe futhi yakhelwe yi-EA Sports, eyaziwa ngekhwalithi yayo engenakuphikwa kuma-consoles noma ahambisanayo, futhi ingenye yemidlalo yebhola likanobhutshuzwayo yamadivayisi eselula. Inawo wonke amalayisense aphethwe nokuba nawo kulo mhlaba, kungaba amaqembu noma abadlali.
Ine-gameplay ehluke ngokuphelele kulokho esikuthola kunguqulo yayo ye-console, i-gameplay edonsa okuningi ohlangothini lwe-Arcade kunokuba kube sekulingisa okumsulwa. Okuhamba phambili ngale nguqulo ukuthi inemodi ye- "Ultimate Team" esivumela ukuthi sijabulele ukuqhubekela phambili kweqembu lethu, lisayina abadlali. Kuyindlela yokudlala yamahhala, ngakho-ke ukulanda kwayo kuzoba mahhala lapho kungenzeka kuthengwe ngaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: AMA-ARTS EZIKHULU
Umthuthukisi: Ubuciko Electronic
I-eFootball PES 2020
Manje sihamba nesihloko esishintsha isihlalo sobukhosi neFIFA, akuyona enye ngaphandle kwePES yenganekwane, i-franchise ezama ukuhambisana minyaka yonke ngokuthuthuka kwe-gameplay, kepha elahlekelwe ngumfutho uma kukhulunywa ngamalayisense. Yize kuliqiniso ukuthi le nguqulo yamadivayisi eselula inesigaba sobuchwepheshe esingakholeki, esijabulisa wonke umuntu odlalayo.
Sine-gameplay efana neFIFA, edonsela isici se-Arcade esimakwe kahle. Yize inhloso yethu ukudlala wedwa, sizoba nemodi yabadlali abaningi eyondlekile yokudlalela, kufaka phakathi amaligi endawo nabangani abaxhunywe nge-bluetooth uxhumano.
I-eFootball PES 2021
I-Soccer League Soccer
Ama-titan amabili awakwazi ukudideka, ngoba kukhona impilo eningi emva kwawo, ingenye yemidlalo elinganiswe kahle kunazo zombili i-iOS ne-Android. Ihlanganisa i-Gameplay enhle, ihluzo ezihlaba umxhwele namalayisense. Lokhu kuholela kufayela le- inani elikhulu lamaligi, amaqembu nabadlali.
Izinhlobo ezahlukahlukene zemidlalo, phakathi kwazo okuyiyo enikeza incazelo kumdlalo, lapho sinenkululeko yokwakha khona "Ithimba Lamaphupho" lethu. Ngaphezu kwalokho futhi sizokwazi ukufinyelela kwimodi yabadlali abaningi uma sifisa. Uhlobo lwakho lwe-iOS lusiphoqa ukuthi sixhumeke, noma kunjalo ngishiya isixhumanisi.
Register Ikhodi ye-QR
Umthuthukisi: Okokuqala Ukuthinta Imidlalo Ltd.
I-Dream League Soccer 2021
Ibhola langempela 2020
Lesi sihloko esakhiwe futhi sashicilelwa yiGameloft besingalahleka. Kuyinto simulator yamahhala ngokuphelele, lapho Singazakhela iqembu lethu, sisayine abadlali noma amalungu ethimba labaqeqeshi.
Sizoba nethuba lokwakha idolobha lethu lezemidlalo futhi silithuthukise kancane kancane, kulokhu asiyithokozeli imodi yabadlali abaningi abazinikele, yize sinokuqukethwe okwanele okungaxhunyiwe kwi-inthanethi okungakuphutheli.
Umthuthukisi: I-Gameloft SE
Umdlalo webhola wangempela wango-2020
Umthuthukisi: UMuhammad Asif
I-Soccer Star 2020 Amaligi aphezulu
Lapha sithola isihloko esigxile kuphela kumaligi amazwe ahlukene, esivumela ukuthi sihlanganyele kuwo wonke. Singaqala umsebenzi wethu njengomdlali ojwayelekile wokugcina sibe yinkanyezi enkulu, bancintisana emaqenjini ahamba phambili emhlabeni.
Ngaphezu kwenkundla yezemidlalo, kuzofanele futhi sinake neyangasese, lapho singathenga khona izindlu noma izimoto. Kanye nokuqasha abaqeqeshi bethu ukusisiza ekuqhubekeni kwethu.
I-Soccer Star 2021 Amaligi Aphezulu: Umdlalo Ohamba phambili weSoka
Umthuthukisi: I-Viva Games Studios
I-Soccer Star 2021 Amaligi aphezulu
Umthuthukisi: Qalisa kabusha imidlalo
Umphathi webhola 2020 Iselula
Classic phakathi zabuna. Akuwona umdlalo webhola lezinyawo ojwayelekile njengeFIFA noma iPES, kulokhu ngumdlalo wokuphathwa kwezinsizakusebenza, kokubili ezomnotho nezemidlalo. Sithatha izintambo zethimba njengabamele kakhulu futhi umsebenzi wethu kuzoba ukuyikhuphula phezulu.
Lesi sigaba se-SEGA si itholakalela i-Android ne-iOS ngenani elingu- € 9,99Ekuqaleni kungabonakala kubiza, kepha inani lamahora esingawafaka imali liyakufakazela lokho. Ngincoma ukucwaninga ngaphambi kokubuka i-GamePlay ukuthola umbono wokuthi ikuphi.
Umphathi webhola 2020 Ucingo
I-Final Kick 2019
Esinye isihloko esingeke sidlale ngaso ngesitayela sendabuko, lapho inhloso yethu ukudlala nokuwina imijikelezo ehlukene yamaphenalti, namaqembu ahamba phambili emhlabeni. Inemodi engaxhunyiwe ku-inthanethi naku-inthanethi, ekuvumela ukuthi udlale nabangani.
Akungabazeki ukuthi umdlalo olula kakhulu kulo lonke uhlu, lapho noma yimuphi umdlali angadlala ngokukhululeka kungakhathalekile ubudala noma ikhono.
Ukugcina ukukhahlela ngo-2019: Ibhola elijeziswa kakhulu online
Umthuthukisi: Imidlalo ye-Ivanovich
I-Final Kick: Ibhola eliku-inthanethi
I-2020 Eyishumi Naphezulu
Kulomdlalo lapho i-protagonist ingeyena umdlali webhola, kodwa umqeqeshi. NjengoMphathi weBhola, sithola i- ukuphathwa kwevidiyo, lapho singabhekana khona nephrojekthi yeklabhu encane ukuyenza ibe enkulu kunayo yonke. Okusiqinisekisa ngenani elikhulu lamahora wokuzijabulisa.
Kungumdlalo ozuze isisekelo esikhulu somsebenzisi ngenxa yokusebenza kwawo okuhle. Singakulawula konke okwenzekayo, kwezemidlalo nakwezomnotho.. Ukwakhiwa kwamajezi, abadlali, ukwakheka, ezezimali noma inkundla uqobo lwayo.
I-Top Eleven 2021: Umphathi weSoka
Abayishumi nanye abaphezulu: Umphathi weSoka
Indebe yebhola 2020
I-Soccer Cup ngumdlalo webhola omnandi, lapho kuzodingeka sinqobe zonke izinhlobo zezinselelo esizozivula njengoba sidlala. Umdlalo ungenye yesisindo esincane ngokwenkumbulo nangemfuneko yezobuchwepheshe. Lokhu kusho ukuthi izosebenza kakhulu uketshezi noma kubanga lokufaka.
Sizoba nendlela yokusebenza esizothuthukisa ngayo futhi sithuthukise iqembu lethu. Umdlalo ungomunye weqiniso kakhulu ngokulinganisa.
I-Football Cup 2021: Imidlalo Yebhola
Umthuthukisi: IMIDLALO YOLWAZI - ibhola likanobhutshuzwayo legalofu
Indebe yebhola 2021
Umthuthukisi: Inlogic Software sro
Ukuqeda lokhu kuhlanganiswa, sihamba nomdlalo omnandi kanye nokungajwayelekile. I-Retro Soccer ngumdlalo we ibhola elinokubukeka okungokoqobo kepha elinemibala egqamile. Ine-gameplay enkulu kakhulu futhi elula yazo zonke izethameli.
Iqukethe izindlela ezahlukahlukene zemidlalo, kufaka phakathi izindlela zeligi noma izinselelo zomuntu siqu.
I-Retro Soccer - Ibhola le-Arcade
Umthuthukisi: Iselula Gaming Studios Ltd.
Umthuthukisi: Izitudiyo Zokudlala Zeselula
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Imidlalo eyi-10 ehamba phambili yebhola ngaphandle kwe-Intanethi, ye-iOS ne-Android
I-ASUS ZenBook Duo: Ikhompyutha ephathekayo enezikrini ezimbili ezizayo
Ungawudlulisa kanjani ngesandla ngesandla ngqo kwikhompyutha yakho ene-Google Lens